Naya Post Nepal | कस्ता व्यक्तिलाई हुन्छ पा’यल्स, कसरी गर्ने उपचार ?
कस्ता व्यक्तिलाई हुन्छ पा’यल्स, कसरी गर्ने उपचार ?
नेपालीहरूलाई धेरै हुनेमध्येको रो’ग हो, पायल्स। खानपिनको का’ रणले होला पछिल्लो समय यो रोगबाट पी’डित हुनेहरू ब’ढिरहेका छन्। पायल्स भनेको दि’सामा रगत जानु हो। जुन अवस्थामा दुख्ने भन्ने हुँदैन। दिसा गरिसकेपछि रगत जानुलाई हामी पा’यल्स भन्छौं। रगत जाँदा दुख्छ भने त्यो पा’यल्स होइन। दिसा गर्दा दु’ख्छ तर र’ गत जाँदा दु’ख्दैन।
पा’यल्स थु’प्रै का’रणले गर्दा हुन्छ। मुख्य का’रण कब्जियत हो। महि लाहरूलाई गर्भावस्थामा पनि पायल्स हुन्छ। ग’र्भावती भएको बेला मा नसाहरू थि’चिन्छ जसले गर्दा क’ब्जियत हुन्छ। त्यसपछि म’ल द्वारको नसा फुटेर र’गत पनि जान्छ।
यसको उ’पचारका लागि सबैभन्दा पहिला रोगको अ’वस्था हेर्नुपर्छ। पायल्स दुई कि’सिमको हुन्छ। म’लद्वारको भित्री भागमा भयो भने त्यसलाई इन्टरनल हेमोराइट्स भनिन्छ। बाहिरी भागमा नसा पला एको छ भने त्यो एक्स्टर्नल हे’मोराइट्स हो, जुन छा लाले ढा’किएको हुन्छ।
पा’यल्सका चार च’रण हुन्छन्।
‘फर्स्ट डिग्री हेमोराइट्स’: को च’रणमा रगत जाने हुन्छ तर केही नि’स्किँदैन। ‘सेकेन्ड डिग्री हे’मोराइट्स’ भयो भने दिसा गर्ने बे लामा रगत आउँछ र सँगै मासुको डल्लो बाहिर नि’स्किन्छ। दिसा गरिसकेपछि भित्र पस्छ।
‘थर्ड डिग्री हमोराइटस’: दिसा गर्ने बेलामा बा’हिर निस्केको मासु भित्र पठाउन ठे’ल्नु पर्ने हुन्छ।
‘फोर्थ डिग्री हेमोराइट्स’: मा त्यो मासुको डल्लो बाहिरको बा’हिरै रहन्छ।
उपचार गर्दा बिरामीको पा’यल्स कुन डिग्रीमा छ भन्नेमा भ’र पर्छ।
फ’र्स्ट र सेकेन्ड डिग्री हेमोराइट्सका लागि खानपानलाई नियन्त्रण गर्ने र क’ब्जियत हुन नदिने हो अथवा औषधी खाने हो भने ठि’क हुन्छ।
‘थर्ड र फोर्थु डि’ग्रीमा पुगेको छ भने अ’प्रेसन पनि गर्नु पर्ने हुनसक्छ।
रगत गइरह्यो भयो भने ‘इमर्जेन्सी’ अप्रेसन गर्नुपर्छ। न’शामा जाम भयो भने बिरामीलाई दु’खाइ बढी हुन्छ, अप्रेसन नगरी हुन्न।
ला’परबाही गरे के हुन्छ ?
लापरबाही गर्‍यो भने ज’टिलता आउन सक्छ। रगत बढी जाने भ एकाले र’क्तअल्पताको ख’तरा हुन्छ। कहिलेकाहीँ सं’क्रमण समेत हुन्छ।
मासुको डल्लो बाहिरको बा’हिरै रह्यो भने त्यहाँ घाउ हुन्छ भने नशामा र’गतसमेत ज’म्छ। यसले क्या’न्सर भने गराउँदैन।
के खानेर के नखाने ?
धेरैजसो पा’यल्समा अप्रेसन गर्नु पर्दैन। यसको मुख्य कारण कब्जि यत हो। त्यसैले दिसा सा’ह्रो हुनबाट जो’गाउनु पर्छ। मासुलगायतका धेरै प्रोटिन हुने खा’नेकुरा, पिरो, चिल्लो र मसलाले पनि कब्जियत गराउँछ। हरियो तरकारी, सागपात र बढी झो’ल खाने हो भने क’ ब्जियत हुँदैन।
पा’यल्सका लागि हामी पनि आ\_युर्वेदिक दबाइ सिफारिस गर्छौं। कब्जियत कसरी ठीक हुन्छ भनेर यो औषधी प्र’योग गरिन्छ। गाउँ घरमा प्रयोग हुन इसबगोलले क’ब्जियत हुन दिँदैन। त्यो प’द्दति जसले प्रयोग गरे पनि क’ब्जियत नै ह’टाउने हो।
अप्रेसन गरे पनि पा’यल्स दोहोरिन सक्छ। अ’प्रेसन गर्दा जुन नसा सुन्निएको हुन्छ त्यसलाई बाँधेर निकाल्ने हो। तर क’ब्जियत भइरह्यो भने फेरि दो’होरिन सक्छ। ५/६ वर्षसम्म हुँदैन तर खानामा ध्या’न दिइएन भने फेरि दोहोरिन सक्छ। कतिपय अ’वस्थामा त दिसा न’रो किने स’मस्या पनि हुन सक्छ।
२०७८ पुष १४, बुधबार प्रकाशित 1 Minute 277 Views